I-NEO-usetyenziso olunye, zonke izinto zemali
Inkqubo yamakhadi amhlophe
SEPA: Isikhokelo sokugqibela
Isikhokelo soMsebenzisi se-NEO sokuQinisekiswa kwezinto ezimbini (2FA)
Izibonelelo zase China
Amagunya amnyama afakwe kuluhlu
Amaxwebhu asetelwe ishishini
Amaxwebhu asetelwe iakhawunti yobuqu
Amaxabiso ee-NEO zeATM / zePOS
INKQUBO ENYE, ZONKE IZINTO ZEMALI
Vula iakhawunti ngemizuzu kanye kwifowuni yakho, kwaye wenze imali yakho iqhubeke
VULA iakhawunti yakho
Ikhadi, dibana nefowuni
Lawula amakhadi kwi-app, cofa nje itephu
Faka isicelo se-akhawunti
Khuphela kwi Ivenkile yosetyenziso Khuphela kwi Google ukudlala
Isisombululo esinyathelo esinye solawulo lwemali olulula
Nokuba uphi na, sebenzisa i-smartphone yakho okanye nasiphi na esinye isixhobo ukuvula iakhawunti yakho ngaphandle kwembambano nge-IBAN yaseYurophu eyahlukileyo. Isicelo sakho esinamaxwebhu amabini obuqu aya kuqwalaselwa ngaphakathi kweeyure.
Isixhobo sokuhlawula abasebenzi
Ukuthobela ngokupheleleyo idatha yabucala
I-100% yeendleko eziselubala
Ukujongwa kwenkcitho yexesha-lokwenyani
Iintlawulo ze-3D zoKhuseleko kwi-Intanethi
VULA I-AKHAWUNTI YAKHO
Unxibelelwano olunobuchule lweselfowuni
Yenza kwaye ulandelele imisebenzi yakho yezemali ngempompo yomnwe wakho, 24/7.
Imbali yokuSebenzisa ukujonga
Iintlawulo ze-Smart phesheya
Enye into ebhankini yakho yendawo
Ishishini ngaphandle kwemida
Ukuba expat kulula
Guqula yonke intengiselwano ibe sisenzo esifanelekileyo.
Ihlathi ngelixa uthengela Sisebenza kunye namaqabane aphambili amahlathi kwihlabathi liphela. Vula ukutyala utshintsho lwakho kuzo zonke izinto ozithengileyo kwaye uncede ekupheliseni umkhondo wekhabhoni. Umthi ngamnye owutyalayo uya kufumana isatifikethi esiqulathe lonke ulwazi olubalulekileyo malunga nomthi: iintlobo, indawo, ulwazi ngeprojekthi yokutyala, ixabiso lembuyekezo le-CO2 nokunye okuninzi. UMthi weSizwe likhaya kwiiprojekthi zokutyala ezingama-90 ezivela kumazwe angama-33 ahlukeneyo.
Imithi eyi-163 710 ityalwe eBurkina Faso
Imithi engama-42 336 ityalwe eMadagascar
Ngama-47 485 emithi etyalwe eColombia
Yi-184 673 yemithi etyalwe eKenya
Bona zakutshanje kwi BancaNEO kumajelo eendaba.
Iimali ezininzi zokuhlawula umda
Akusekho ma-akhawunti ahlukeneyo ngemali yamanye amazwe. Thumela kwaye ufumane imali kwihlabathi liphela ngeemali ezingama-38 nge-IBAN yemali emininzi edityaniswe kwiakhawunti enye.
Izibonelelo ezizodwa ze Abanini bamakhadi be NEO
Sebenzisa nje ikhadi lakho le-NEO kwaye wonwabe ngeentengiso ezizodwa, izibonelelo kunye nezinto ozithandayo.
Ukufumana ukufikelela kwiintlobo ngeentlobo zeentengiso kunye nezivumelwano, kubandakanya ukutya kunye newayini, ukuthenga, ezemidlalo, ukuzonwabisa kunye nokunye.
Ukhuseleko kunye nesandi
Iimpawu zokhuseleko ze-Smart ukugcina imali yakho ikhuselekile. Sithobela imigangatho ephezulu yezokhuseleko ye-EMI ukugcina imali yakho kunye nedatha yobuqu ikhuselekile.
Imali yabathengi igcinwa kwiakhawunti eyahluliweyo kwiBhanki kaZwelonke yaseLithuania
Ukukhuselwa kwemali kusetyenziswa i-3D ekhuselekileyo kunye ne-2FA
Isoftware yokulwa ubuqhetseba kunye neenkqubo zenkqubo
Faka isicelo seAkhawunti ngeMizuzu
Fumana iakhawunti yakho ye-NEO namhlanje!
Fumana iAkhawunti yakho ye-NEO
Ngokubonelela ngezixhobo ezisemgangathweni ophezulu kunye nezobuchwephesha kumawakawaka abathengi, siguqula imeko yezemali yehlabathi, sivulela amathuba esizukulwana esitsha sabasebenzisi beenkonzo zezemali kunye nokuphakamisa inqanaba labo lokufunda ngezemali.
Indawo: Naituse tn 3, Tartu , 50409, Estoniya
Bancaneo kunye neSatchel lilungu eliyintloko le-MasterCard Yurophu ngokukhupha ikhadi.
Bancaneo I-Satchel isebenza phantsi kweSatchelpay UAB (reg Nr. 304628112) enelayisensi liSebe leNkonzo yokuGada yeBhanki eNkulu yaseLithuania kwaye yanikezela ilayisensi yeziko lemali elektroniki uNr. 28, ngenkqubo yokuthatha inxaxheba ikhowudi yeNr. Eqhuba ishishini phantsi kwemithetho yeRiphabhlikhi yaseLithuania.
Ilungelo lokushicilela @ 2021 NEO. Onke Amalungelo Agciniwe